မြန်မာနိုင်ငံ၏သာသနာရေးဦးစီးဌာနအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မြန်မာနိုင်ငံ၏သာသနာရေးဦးစီးဌာနအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်	November 11, 2009
ဒကာကြီးရဲချုပ်မောင်ခင်ရီကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ.ခံရသောသတင်းကိုဖတ်မိတဲ့အခါတုန်လှုပ် ခြောက်ခြားသွားပါသည်၊မကောင်းတဲ့သူ၊မုသာဝါဒသမားတွေကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအမူထမ်းဆောင်ခိုင်းတာဟာမြန်မာပြည်၏သာသနာထွန်းကားရေးကိုထိခိုက်မည်ဆိုတာသေချာပါသည်၊ငလိမ်၊ငညာ၊မသမားသူတွေကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဖြ စ်နေတာကိုလည်းရှက်စရာကောင်းလှဘိ၊သာသနာထွန်.ကားရေး၊ပြန်.ပွားရေးလို.အော်နေတဲ့စစ်အစိုးရခေတ်မှာသာသနာကိုမှေးမှိန်းအောင်၊သာသနာဆုတ်ယုတ်အောင်လုပ်နေသဖြင့်မိစ္ဆာဒိဌိသမားတွေဖြစ်ကြကုန်ပြီ၊မုသာဝါဒါဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဒိယာမိကို ပါစပ်နဲ.လိုက်ရွက်ပြီးစိတ်ထဲမှာ ငါပါးသီလလည်းမခြုံ၊သံဃဘေဒကကံလည်းကျူလွန်ထားပြန်တော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဟာ သာသနာထွန်းကားအောင်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူယုံမလဲ၊
လွန်ခဲ့သော (၁၁)နှစ်လောက်တုန်းကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်၊ဦးဇင်တို.ဘုန်းကြီး (၉)ပါး ဗုဒ္ဓဂါယာသွားလည်ရန်အစီစဉ်ရှိသဖြင့် ပတ်စပို.လျှောက်ကြတာပဲ၊ အဲဒီအချိန်တုန်ကဆိုရင် (၁၀)ဝါမပြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပတ်စပို.ထုတ်မပေးဖို.တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့၊ဘုန်းကြီး(၉)ပါးအထဲမှာဘုန်းကြီး(၂)ပါးက (၁၀)ဝါမပြည့်တဲ့အခါပိုးပြီးအခက်အခဲရှိတာပေါ့၊ (၁၀)ပြည့်ပြီသာဘုန်းကြီးတောင်မှ ထောက်ခံစာကျလာဖို.ကမလွယ်လှတဲ့ဟာကိုး၊ထောက်ခံစာက သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ သွားတောင်းရတယ်၊စာအိတ်မပါရင်တစ်ခါသွားမေးလည်းမရသေးဘူးဘုရား၊နှစ်ခါသွားမေးရင်လည်းမကျလာသေးဘူးဘုရား နဲ.ပဲ အခေါက်ပေါင်းမနဲအဝင်အထွက်လုပ်ခဲ့ရတယ်၊တစ်နေ.ကျတော့ ဦးဇင်တို.ဆွေးနွေးကြတယ်၊ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့၊ပတ်စပို.လုပ်ခဲ့ဘူးသောဘုန်းကြီးတွေဆီမှာသွားပြီးအကြံဥာဏါသွား မေးကြတာပေါ့၊ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတစ်နှစ်အတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပကို ၃ ကြိမ်ကနေ ၅ ကြိမ်အထိအဝင်အထွက်လုပ်နေတဲ့သူပါ၊ဦးဇင်တို.ကလည်း ထို.ဘုန်းကြီးဆီမှာပဲအကြံဥာဏ်ကောင်းကောင်းတွေရရှိခဲ့တာပဲ၊သူပေးတဲ့အကြံဥာဏ်ကသိပ်မခက်လှပါဘူး၊“ လွယ်လွယ်လေးကခက်တယ်၊နဲနဲလေးကနက်တယ်” ဆိုရိုစကားအတိုင်ပါပဲ၊ဘုန်း ကြီးတို.ထောက်ခံစာသွားတောင်ရင် စာအိတ်တစ်အိတ်ယူသွားရမယ်၊ပတ်စပို.ကို ခဏခဏလုပ်ရင် အထဲမှာ ငွေများများထည့်ပေးရမယ်၊ ၂၀၀၀ နှင် ၃၀၀၀ အကြာပေါ့၊ခဏခဏမလုပ်ပဲတစ်ပွဲရိုက်လောက်ရုံပဲဆိုရင် ၅၀၀ လောက်ဆိုတော်ပြီးပေါ့ လို.ဘုန်းကြီးကအကြံပေးတယ်၊ဟာ..ဒါဆိုကောင်းပြီလို.ဦးဇင်တို.ပြောတယ်၊ နောက်တစ်နေ.မှာပင်ဦး ဇင်တို. ကမ္ဘာအေးကိုသွားတယ်၊သာသာနဦးစီးဌာနရုံပေါ့၊ ဟိုရောက်တော့၊ စာအိတ်တွေကိုစာရေလုပ်တဲ့သူကမျက်စိထားလိုက်ရင်မြင်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမှာ ကိုင်ထားပါတယ်၊ပေါ်လွန်လည်းမ ဟုတ်၊ဝှက်လွန်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့၊ ရုံထိုင်တဲ့ဒကာက ဘုန်းဘုန်းတို. ဘာကိစ္စရှိလည်းဘုရားလို.လျှောက်မေးတယ်၊ထောက်ခံစာ ကိစ္စလာမေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်၊ အဲဒီအချိန်ကစာအိတ်(၅)အိတ်တွေကိုစာပွဲပေါ်မှာဦးဇင်တို.တင်လိုက်ပြီ၊ရုံထိုင်ကလည်းခဏစောင့်ပါဘုရားလို.ပြောပြီးအထဲဝင်သွားတယ်၊ရုံထိုင်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ ထောက်ခဲစာပြုလုပ်ပြီးစီးကြောင်း ပြောပြီး ပတ်စပို. (၉)အုပ်ကိုထုတ်လာပေးတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဦးဇင်တို.ပြောပြီး စာ အိတ်တွေကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်၊ရုံထိုင်ကလည်း မသိသလိုဟန်ဆောင်ပြီး အထဲမှာ ဘာလဲဘုရားလို.မေးသေးတယ်၊ ဦးဇင်တို.ကလည်း ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ ဒကာကြီးဦးအံ့မောင်အတွက်ပါဆိုပြီး ရပါတယ်ဘုရား၊တပည့်တော်သွားပေးလိုက်မယ် လို.ပြန်ပြောတယ်၊
နယ်ကဆရာတော်များ၏ပတ်စပို.အပါအဝင်(၉)အုပ်အတွက် စာအိတ်(၅)အိတ်အထဲမှာ တစ်အိတ်ကို (၅၀၀)ပဲဦးဇင်တို.ထည့် ပေးနိုင်တော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးအံ့မောင်အတွက် တွက်ချေမကိုက်ဖြစ်သွားတာပဲ၊ ဦးဇင်တို.ကလည်း အတွေ.အကြုံရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး၏အကြံပေးတဲ့အတိုင်ပါပဲ၊တစ်ပွဲရိုက်ဆိုရင်ကျပ် (၅၀၀)လောက်တော်ပြီပေါ့ လို.မှတ်ပြီး သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာနကထုတ်ပေးတဲ့ထောက်ခံစာလည်း အဆင်ပြေသွားခဲ့သည်။
နှစ်ရှည်ထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာသူပုန်တွေကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်